Nutrition – Page4– Healthy Life Journal
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ်မှာ အသက်၁၉နှစ်အရွယ် ရောက်လာတဲ့အခါ အသက် ၁၃ နှစ်ကနေ ၁၈နှစ်အရွယ်လောက်တုန်းက အာဟာဓာတ်တွေ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရရှိခဲ့မယ်၊ သင့်တင့်မျှတတဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် အခုအရွယ်မှာ လိုချင်တဲ့...
သက်တံ့ရောင် အစာစားခြင်း၏ ကောင်းကျိုးများ
သင်စားမယ့် ပန်းကန်ပြားထဲ အရောင်စုံပါ လေလေ၊ အာဟာရဓာတ် အစုံအလင်ရရှိလေလေ ဖြစ်ပါတယ်။ သက်တံ့ရောင်အစားအသောက်တွေ ကို စားပေးရင် သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေကို မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ – အစိမ်းရောင် အစိမ်းရောင် သစ်သီးဝလံတွေကို စားတာ၊ ကြိတ်ပြီး အရည်ဖျော် သောက်တာ...
ဒေါက်တာ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်နဲ့ အရေးကြောင်းတွေဖြစ်တာက အာဟာရနဲ့ ဆိုင်ပါသလား။ ဖြေ. ဆိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီအကြောင်းပြောပြပါမယ်။ ဝက်ခြံ အချိုများများ စားတဲ့သူတွေက ဝက်ခြံတွေ ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။ နေပူဒဏ်ခံရရင်လည်း ဝက်ခြံထွက်စေနိုင်ပါတယ်။ မနက်...
၊ ကိုထက် ၊ အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် ကျောင်းသူလေး အေဗရယ်ဟာ ကျောင်းတစ်ခုမှာ သွားရောက် ပညာသင်နေပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာ ၁၅ ရက်မှာ အာဟာရပြတ်လပ်တဲ့ ဝေဒနာနဲ့ သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတွေ...
သင်စားမယ့် ထမင်းပန်းကန်ပြားထဲ ဘာတွေပါသင့်သလဲ . . .
ကျန်းမာသက်ရှည်ဖို့ ကိုယ်စားမယ့်ထမင်းပန်းကန်ထဲမှာ ထည့်စားသောက်သင့်တာနဲ့ ဆင်ခြင်သင့်တာတွေကို မျှဝေလိုက်ရပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သောဆီ – ဟင်းချက်တာ၊ ဟင်းရွက်သုပ်တာ စတာတွေမှာ သံလွင်ဆီလို ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အဆီကို ရွေးချယ်ပါ။ ထောပတ်ကို ထိန်းချုပ်စားပါ။ ထရန့်စ်ဖက်စ် (ထပ်ပြန်ကြော်ဆီ)ကို ရှောင်ပါ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ –...
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) မေး. ဆီးချိုရောဂါရှိပါတယ်။ ကန်စွန်းဥနဲ့ အာလူး စားလို့ရပါသလားရှင့်။ ဖြေ. စားလို့ရပါတယ်။ ကန်စွန်းဥရဲ့သဘာဝက ဗိုက်ပြည့်လွယ်ပါတယ်။ တချို့နေ့တွေမှာ ကန်စွန်းဥတစ်လုံးလောက် စားထားတယ်ဆိုရင် စွတ်ပြုတ်တစ်ခွက်လောက် သောက်ပေးရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အာလူးမှာလည်း ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ် အဲလောက်အများကြီးမပါပါဘူး။...
ဒန်ပေါက်နဲ့ ကြက်ဆီထမင်း ယှဉ်ရွေးမယ် ဆိုရင် . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)ဖြေကြားသည်။ မေး ဒန်ပေါက်နဲ့ ကြက်ဆီထမင်းမှာ ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်တွေ ပါဝင်ပါသလဲရှင့်၊ ဒန်ပေါက်နဲ့ ကြက်ဆီထမင်း ဘယ်အရာက စားဖို့ပိုသင့်တော်ပါသလဲဆိုတာ သိချင်လို့ဖြေပေးပါနော်။ မသွယ်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်။ ဖြေ ဒန်ပေါက်ဆိုရင် အဆီအနှစ်များတဲ့အတွက် ဆီးချိုသမား၊ သွေးတိုးသမား လုံးဝမစားသင့်ပါဘူး။...
ပုစွန်စားခြင်း၏ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပုစွန်ဟင်းလျာစားတာကြောင့် အောက်ပါကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ – ပုစွန်မှာ ဆီလီနီယမ် အကောင်းဆုံးပါဝင်နေပါတယ်။ – ပုစွန်စားတာကြောင့် သွေးခဲတာ ကင်းဝေးစေပါတယ်။ – သွားဖုံးရောင်ရမ်းမှုကို လျော့ပါးစေပါတယ်။ – အဆီနဲ့ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု နည်းပါတယ်။...